Camille Vital : Nopotehin-dRajoelina sy Ravatomanga -
AccueilRaharaham-pirenenaCamille Vital : Nopotehin-dRajoelina sy Ravatomanga
Ny faha-24 septambra, izany hoe, dimy taona androany no nanombohan’ny fampielezan-kevitra tamin’ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2013. Tsy ny famotsiam-bola maloto na trafika-na « bois de rose », na fanodinkodinam-bolam-panjakana irery ihany no mampalaza an’i Mamy Ravatomanga, fa eo indrindra koa ny famitahana olona tsy misy hena-maso…
Nampodiana dia nodakana
Notendrena ho praiminisitra HAT nisolo an’i Mangalaza Eugène (nambanan’ny milisin-dRajoelina tamin’ny kalachnikov hametra-pialana hoy Ratsiraka) ny jeneraly Camille Vital ny faha-20 desambra 2009, nosoloin’i Omer Beriziky teo amin’izany seza izany ny faha-29 oktobra 2011, ary voatendry ho ambasadaoro tany Genève ny taona 2012. Nampodian’i Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga any Genève ity jeneraly ity rehefa notendrena hisolo toerana ny filohan’ny HAT amin’ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2013. Nanomboka ny fikarakarana sy ny fanomanana rehetra, ka i Mamy Ravatomanga mihitsy no nandray an-tànana izany. Maro ireo fifanarahana efa noraiketina hiatrehana ny fifidianana (fanofana helikôptera, trano, fiara, artista, sns). Tampoka anefa nodakan’i Mamy Ravatomanga tany amin’ny marary azy i Camille Vital rehefa natolotr’i Jules Etienne sy Kolo Roger ho kandidà i Hery Rajaonarimampianina, taorian’ny CES II. Navelany nitanjaka irery teo anatrehan’ireo fifanarahana maro efa noraiketina ny jeneraly Camille Vital, izay tsy nivonona ara-bola hilatsaka kandidà ho filoham-pirenena.
Nametra-pialana tsy ho tale jeneralin’ny prezidansa sy ny fitondrana Tetezamita ny volana aprily 2013 i Mamy Ratovomalala, minisitry ny Angovo sy Harena an-kibon’ny tany teo aloha. Nanome tanana ny jeneraly Camille Vital ny tenany taorian’ny famitahana nataon’i Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga ny tenany. Nanangana ny antoko Hiaraka Isika, ary nanohy ny fiatrehana ny fifidianana. Namoahan’i Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga IST (Interdiction de sortie du territoire) anefa i Mamy Ratovomalala sy Camille Vital, nosakanana tsy navela niditra ireo « tee-shirt » ilay amin’ny propagandy, nampiasaina ny SAMIFIN, ary nolatsain’i Andry Rajoelina hatramin’ny grady jeneraly teny am-bozonan’i Camille Vital, ankoatra ny fiampangana fa nikasa hamono an-dRavalomanana ity praiminisitra HAT teo aloha ity.
Mitovy amin’ireny Mafia any ivelany ireny mihitsy i Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga. Potehin’izy ireo amin’ny fomba rehetra mihitsy, izay tsy manaiky ny baiko sy ny sitrapony tahaka ny nahazo an’i Camille Vital, izay voatery niverina niankohoka amin-dRajoelina sy Ravatomanga ankehitriny. Nopotehin’izy ireo avokoa ireo mpiara-dia taminy tao amin’ny HAT nilatsaka ho kandidà ny taona 2013, toa an’i Hajo Andrianainarivelo, ary nampiasainy tamin’izany ireo hainoamanjery teo am-pelatanany.
Toraka izany koa i Hery Rajaonarimampianina, izay noheverin’i Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga ho saribakoliny rehefa tonga eo amin’ny fitondrana, ka hanaiky sy hankato ny baiko rehetra. Ny hanao sarivongana fotsiny an’i Hery Rajaonarimampianina mantsy no tanjon’i Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga, fa izy ireo no manendry izay ho minisitra sy tompon’andraikitra ambony hatramin’ny ambasadaoro any ivelany. Ireny niaraha-nahita ireny ny fanenjehana sy ny fikasana hanongana ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina. Noho ny sitrapon’i Mamy Ravatomanga daholo no fototr’izany rehetra izany, dia izao Andry Rajoelina manao izay hiverenana eo amin’ny fitondrana izao.
Fifampiarahabana eny Iavoloha:STYLISTA MARO NO NANOLOTRA AKANJO HO AN’NY VADIN’NY FILOHA
Amin’ny zoma izao no hanatanterahana ny fifampiarahabana ofisialy nahatratra ny taona vaovao iarahana amin’ireo masoivoho vahiny sy ireo andrim-panjakana atao eny Iavoloha. Efa fomba fanao mahazatra isan-taona izany. Amina tranga tahaka ireny dia reharehan’ny “styliste” ...Tohiny
Aéroport Nosy-Be : Hahazaka fiaramanidina goavana